NetEase ၏ Q4 ဂိမ်း ဝင်ငွေ သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၂၉. ၈% တိုးတက် ခဲ့သည် - Pandaily
NetEase ၏ Q4 ဂိမ်း ဝင်ငွေ သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၂၉. ၈% တိုးတက် ခဲ့သည်
Feb 24, 2022, 20:07ညနေ 2022/02/24 23:18:37 Pandaily
တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး NetEase၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့် ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် ဘဏ္ reports ာရေး အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂၄. ၄ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၈ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၃. ၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ GM မဟုတ်သော အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၆. ၆ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်၎င်း၏ အသားတင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၈၇. ၆ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉% တိုးလာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာရှင် များ ပိုင် ဆိုင်သော US မဟုတ်သော GS အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၁၉. ၈ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Q4 နှင့် အွန်လိုင်း ဂိမ်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ အသားတင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁၇. ၄ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် ထက် ၂၉. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လျှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်း ဂိမ်း ၀ န်ဆောင် မှုမှ အသားတင် ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၆၂. ၈ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
ဂိမ်း ၏ စည်းကမ်း ချက် များ၌, Nairaka: Blade Warrior အဆက်မပြတ် အသုံးပြုသူ အမြင့်ဆုံး ထိမှန် နှင့် Steam ရဲ့ 2021 အကောင်းဆုံး ဂိမ်း စာရင်းတွင် “အရောင်း ရ ဆုံး” အဖြစ်သတ်မှတ် ခံခဲ့ရသည်။ Harry Potter: Magic Awakens သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ iOS download နှင့် games Box Office ဇယား များ ကို၎င်း၏ စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာ အသစ် များဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ Entertainment Circle: Dream Catcher သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပွဲ ဦး ထွက် ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ iOS download ဇယား တွင် နံပါတ် တစ် နေရာတွင်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အောင်မြင်စွာ စာရင်းဝင် ခဲ့သော NetEase Cloud Music သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အသားတင် ဝင်ငွေ ယွမ် ၁. ၉ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၃. ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၇ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် လွတ်လပ်သော ဂီတသမား အရေအတွက်သည် ၄၀၀, ၀၀၀ ကျော် ခဲ့ပြီး ပလက်ဖောင်း ဖန်တီး သူ အရေအတွက်သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် နှစ်ဆ တိုးခဲ့သည်။
စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် NetEase Cloud Music သည် Modern Sky ၊ Emperor Entertainment (Hong Kong) Co., Ltd., China Records Corporation, Rock Forward နှင့် Yuehua Entertainment စသည့် အဓိက စံချိန်တင် ကုမ္ပဏီ ၅ ခု သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့် ကိုင်ဆောင် သူများနှင့် မူပိုင်ခွင့် သဘောတူညီ ချက်များ ကိုအောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပလက် ဖော င်းသည် သုံးစွဲ သူများအား အရည်အသွေး မြင့်မားသော အကြောင်းအရာ များ ပေးရန် “ခန္ဓာကိုယ် သုံး ပြ problem နာ” နှင့် “အာကာသ လှည့်လည် ခြင်း” စသည့် အော် ဒီယို စာအုပ် များ ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဂိမ်းကစား ခြင်းလုပ်ငန်း သည် အကြီးအကျယ် အလုပ်ပြုတ် မှု အန္တရာယ် နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ သည်
NetEase သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Q4 ၏အ သားတင် ၀ င်ငွေသည် ယွမ် ၁. ၃ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၀. ၅% တိုးလာပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသားတင် ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၅. ၄ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ NetEase သုတေသနနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ NetEase မီဒီယာ နှင့်အခြား ဆန်းသစ် သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ သည်ပုံမှန် တိုးတက်ခဲ့သည်။ Q4 နှင့် ၂၀၂၁ တွင် သူတို့၏ အသားတင် ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၃. ၈ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၁၂. ၄ ဘီလီယံ အသီးသီးရှိသည်။
ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ SHWAN Holdings ရဲ့ ကြေညာချက်တစ်ရပ်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်မှာ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။